इन्टरनेट, फेसवुक र ट्विटर नभएको भए कसरी वित्थ्यो होला है लकडाउन – Saurahaonline.com
ds before 1st paragraph
केशब सापकोटा : लामो छुट्टी पाए जस्तै भएको छ आजकल । ५२ दिन भो घरबाट बाहिरिन नपाएको । यो लकडाउन मलाई बढ्तै भयो । वाफ रे ! ५२ दिन, ७ हप्ता ३ दिन ! १२४८ घण्टा । ३६००० मिनेट । अझै कतिदिन बस्नुपर्ने हो ? सोच्दापनि दिक्क लागेर आउँछ ।
साँच्ची यो फेसवुक, इन्टरनेट, युट्युव, टिभी मोवाइल नभएको भए कसरी वित्थ्यो होला नी हाम्रो दिन ? मकालु खबर